Amakhandlela Amagagasi Panavir
I-suppository yama-vaginal Panavir ngumkhiqizo wokwelapha wokukhiqizwa kwekhaya. I-Panavir i-immunomodulatory, kanye ne-agent e-antiviral yemvelaphi yemvelo. I-Panavir ikhulisa ukumelana komzimba ezifweni ezinhlobonhlobo. Ngemuva kokunye ukwelashwa okuphelele, lapho kusetshenziselwa khona izidakamizwa, kungenzeka ukuthi ukuhlakulela ukuphindaphinda kubonakala kunciphise, futhi ekugcineni kungabi ngaphezu kwamaphesenti ayisishiyagalombili wenani labo labo abaye bathola.
Izimpawu zokusetshenziswa kwamakhandlela Panavir
Ezinzini zokubeletha, i-Panavir inqunywe kula macala alandelayo:
ukutheleleka kwe-cytomegalovirus ;
kanye nezifo ezibangelwa amagciwane ezingapheliyo.
Odokotela baphinde babone ukuthi ama-suppositories angama-vaginal we-Panavir ku-HPV. Yethula amakhandlela i-Panavir emgodini ebusuku, ngaphambi kokulala nokujulile ngangokunokwenzeka. I-Panavir ayinayo i-allergen, noma i-carcinogenic, noma izenzo ze-embryotoxic.
I-Panavir ibhekisela ku-hexose glycosides, i-polysaccharide ye-molecular high. Kubekezeleleke kahle kumanani okunconywa ngamunye.
Ukulinganisa kwe-Panavir kuncike ebukhulu bezimpawu zesifo esithile segciwane.
Akudingekile ukuba ugweme ukusebenzisa imithi ngezinsuku ezibucayi. Ngokusekelwe kulokhu okungenhla, ungaphazamisi inkambo yokwelashwa ngamakhandlela Panavir ngesikhathi sokuya esikhathini.
Ukungafani nokusetshenziswa kwamakhandlela Panavir
I-Panavir inokuphikisana kwayo - okokuqala, kungukuthi konke, ukuzwela okukhulu kwezinye izakhi zokwakheka kwezidakamizwa, futhi kukhonjelwa ekutheni i-renal pathology ne-spleen pathology. Amakhandlela e-Panavir ekukhulelwe ayinconywa. Ngesikhathi sokulahlwa, odokotela bayelulekwa ukuba bahambisane nalesi sidakamizwa, nakuba kungabonakali lutho, ngokufakazela ngokuqondile ukuthi ekwelapheni kutholakala ubisi lomama.
I-ovary aches ngakwesokudla-izimbangela
Ukuvuvukala kwama-tubes falsipian
Izimpawu ze-cystitis kubantu besifazane
I-Ultrasound yezinhlayiya ze-mammary
Inyangazonke yaqala ngesonto ngaphambili
Ushintsho lwe-ovarian lwe-Cystic
I-Myoma yesibindi esincane
Yini ukuguguleka komlomo wesibeletho kubonakala?
Isimiso sezinhlayiya ze-mammary
I-Cytology in gynecology
Izimpawu ze-cyst yama-ovari kubesifazane
I-Echpochmak - iresiphi
Ikhekhe elilula futhi elimnandi
I-dessert dessert nge-gelatin
Amakhiwane - izakhiwo eziwusizo
Ukudla "I-Grapefruit ne-Egg"
Izinhlobo zezicathulo zabesifazane
Isikhwama Ngendwangu Yezandla Zakho
Ukukhulelwa Amanga Emakati
I-Cranberries, isula ngoshukela - iresiphi
Indlela yokusika ibhodi le-skirting eliphahleni?
Izimpawu ze-chlamydia kubesifazane
Amavithamini wezingane. Amavithamini wokukhula nokuzivikela ezinganeni - ukulinganisa okungcono kakhulu
I-soup noodle ku-multivariate
Izingubo zeMfashini 2016
Ama-hoops ama-cones alungile futhi amabi
UMegan Fox esemncane
Ichibi laseTeletskoe - ukuphumula ngamasasa